कसरी iBooks मा iTunes प्रयोग नगरी ePub फाईलहरू खोल्ने? | आईफोन समाचार
कसरी iBooks मा iTunes प्रयोग नगरी ePub फाईलहरू खोल्ने?
अर्को दिन, एप्पलले iBooks अद्यावधिक गरिरहेको थियो, अनुप्रयोगहरू मध्ये एक जसको सट्टा विचित्र डिजाइन थियो र त्यो व्यक्तिले यसलाई मन परायो। iBooks हाम्रो फ्रि समयमा पुस्तकहरू पढ्न मजा लिनको लागि एप्पलले आईडिएभसका लागि विकसित अनुप्रयोग हो। थप रूपमा, म्याक अनुप्रयोग स्टोरमा आईबुक बुक लेखकको सुरूवातसँग, हामीसँग हुन सक्ने उपयोगकर्ताको अनुभव अविश्वसनीय छ। अनुप्रयोग अपडेट यो प्रयोगकर्ताहरूले राम्रोसँग स्वागत गरेनन् किनकि यसले त्यो डिजाइनलाई हटायो जुन मैले पहिले कुरा गरिरहेको थिएँ र पूरै नयाँ समावेश गरिएको थियो, जसलाई केही प्रयोगकर्ताहरूले परिभाषित गरेका थिए: "सेतो ठाउँ जहाँ सबै कुरा बढी बोरिंग लाग्छ" वा "सेतो पर्खाल भएको साइकियट्रिक"। र यी सबै विचारहरू सहि छन्। आज हामी तपाईंलाई सिकाउन जाँदैछौं ईपब फाईलहरू कसरी खोल्ने (पुस्तक वा कागजातहरू) हाम्रो iBooks अनुप्रयोगमा ITunes प्रयोग बिना धेरै सरल तरिकामा। तपाईं सिक्न चाहनुहुन्छ? पढिरहनुहोस्!
तपाईंको ईमेलबाट EPUB फाईलहरू खोल्दै
मलाई आईबूकको बारेमा सब भन्दा मनपर्ने सुविधाहरू मध्ये एक हो उत्कृष्ट ढाँचा अनुकूलता यसले स्वीकार गर्दछ: PDF र ePub, जुन ढाँचाहरू हुन् जुन म दिनको अन्तमा सबैभन्दा अधिक प्रयोग गर्दछु। जब मैले पहिलो पटक मेरो आईप्याड उठायो मैले केही अनुसन्धान गर्न सिक्नु पर्‍यो कसरी iPunes खोल्न बिना ePub फाईलहरू खोल्न र अब म तिमीलाई यो कसरी गर्ने भनेर देखाउने छु। यसको लागि हामीले निम्न चरणहरू अनुसरण गर्नुपर्नेछ:
इ-पब जुन हामी आईबुकमा आयात गर्न चाहन्छौं हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई मेल द्वारा पठाउनुहोस् वा कुनै पृष्ठबाट यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ हामी यसलाई मेलमार्फत पठाईनेछौं।
एकपटक मेल खोलिएमा हामीले अनुप्रयोगको आईकनमा केही समयका लागि थिच्नु पर्छ iBooks (हामी कसरी जाँच गर्न सक्छौं)
मैले पठाएको फाईलaहो .ePub त्यसैले म यसलाई मेरो iBooks अनुप्रयोगमा खोल्न चाहन्छु, त्यसकारण मैले अनुप्रयोग आइकनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ; तर मेलले हामीलाई फाईललाई अन्य अनुप्रयोगहरूमा आयात गर्न सक्ने सम्भावना प्रदान गर्दछ ड्रपबक्स.
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » कसरी iBooks मा iTunes प्रयोग नगरी ePub फाईलहरू खोल्ने?
एक्सेल फोलि भन्यो
तपाईले बुझाउनु भएको सबै कुरामा म श doubt्का गर्दछु ... जब म इमेमलद्वारा मलाई पठाएको पुस्तक खोल्छु, म यसलाई iBook मा खोल्छु, सबै ठीक छ, समस्या यो हो कि जब मैले यसलाई आइट्यून्समा समक्रमण गर्दछु, यो आईट्यून्समा रहँदैन। , किनकि यस्तो देखिन्छ कि आईट्यून्सले मात्र यसको स्टोरबाट खरीद गरेको बचत गर्दछ। के यो सहि छ ? वा यो मलाई मात्र हुन्छ? के यसको समाधान छ? यस्तो अवस्थामा कसरी गरिन्छ?
एक्सेल फोलिलाई जवाफ दिनुहोस्
मेरो केसमा, आईबूक स्टोरमा आईटमहरू सिंक नगरी अरू केही नगरी मेरो आईट्यून्स लाइब्रेरीमा सिंक हुन्छन्।
हो तर तपाईं मलाई बुझ्नुहुन्न। आउनुहोस्, यदि मैले उही आईप्याडबाट ब्राउजरबाट एक ePub पुस्तक डाउनलोड गरेको छु भने, जब म यसलाई खोल्छु, म यसलाई iBook मा खोल्न रोज्न सक्छु, किनकि म त्यहाँ खोल्छु र सबै ठीक छ ... तर जब म यसलाई जडान गर्छु। आईट्यून्स, यो लाइब्रेरीमा सिंक हुँदैन। .. कारण? त्यो म जान्न चाहन्छु।
Reis Carme Aparicio Peláez भन्यो
मलाई पनि त्यस्तै भयो। तपाईको स्टोरबाट मात्र खरीद गरिएका पुस्तकहरू सि sy्क हुन्छन्। यो पहिले भएको थिएन, यो पछिल्लो अद्यावधिकहरू द्वारा शुरू गरिएको गिरावट हो। कुनै समाधान छैन। यस अनुप्रयोगले यसमा खरिद गरिएका पुस्तकहरू मात्र सिron्क्रोनाइज गर्दछ, पृष्ठहरूसँग नोट ईबुकहरू बनाउन र सबै उपकरणहरूमा यसलाई राख्न समाप्त भयो।
Reis Carme Aparicio Peláez लाई जवाफ दिनुहोस्
"स्वरूपहरूको महान अनुकूलता जुन यो स्वीकार्छ: पीडीएफ र ePub" के यो ढाँचाहरूको एक उत्कृष्ट अनुकूलता हो? LOL
म iBook मा अधिक संग्रह गर्न सक्दिन, जब यो क्लिक गरियो + नयाँ संग्रह मा, कुञ्जीपाटी देखा परेन
कसैले मलाई कसरी उनीहरू कसरी बनेको छ भन्न सक्नुहुन्छ?
मैले यो सँधै गरेको छु जस्तो तपाईले यसलाई व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर अब म सबै चरणहरू अनुसरण गर्दछु र यो अनुप्रयोगमा खुल्दैन। के यो अन्तिम अपडेटको साथ समस्या हुनेछ?
बेट्रिज पास्टर भन्यो
केवल स्पष्ट गर्नुहोस् कि यसलाई पठाउनको लागि ईमेल ICLOUD हो, मैले GMAIL बाट र ICLOUD बाट स्वचालित रूपमा EPUB ढाँचा चिन्न सकेन। धन्यवाद!
बीट्रियाज पास्टरलाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते, तपाईं कस्तो हुनुहुन्छ .. जब म आइबूक खोल्छु यो स्वचालित रूपमा बन्द हुन्छ, के तपाईंलाई थाहा छ के हुन्छ?
क्यामी ट्रा भन्यो
नमस्कार ... म जान्न चाहन्छु कि म कसरी आइबूकमा समस्या समाधान गर्न सक्छु - मलाई कागजात खोल्न सकिदैन - यो pdf पुस्तकहरूको साथ हुन्छ धन्यवाद
Cami tra मा जवाफ दिनुहोस्
म .9.1.3 .१. to मा स्तरबृद्धि गरीएको छु र अब म पुस्तकहरू ईबुकमा खोल्न सक्दिन ... साथै, यो इन्टरनेटबाट जहिले जहिले काट्छ ... यो अरू कसैलाई हुन्छ ???
Amaira लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्कार, कसैले मलाई बुझाउन सक्छ किन iBooks मा जब म एक किताब डाउनलोड गर्दछु म यो अभिव्यक्ति पाउँछ :: :: लोड गर्न सकिएन किनभने अनुरोध गरिएको स्रोत हराइरहेको छ। र त्यहाँबाट म यो खोल्न सक्दिन। मैले के गर्नुपर्छ?
म मेरो .epub लाई Ibooks बाट KOBO पाठकमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। IBooks अद्यावधिक गर्नु अघि मैले यो गर्न सक्दछु, अब यसले मलाई अनुमति दिदैन। के त्यहाँ कुनै समाधान छ?
एप्पलले तपाइँको पुरानो आईफोनलाई दिन र तपाइँको नयाँ आईफोनमा जब यो गीला हुन्छ डिस्काउंट प्राप्त गर्न आवश्यकताहरू कम गर्दछ